Kiiska Badda: Soomaaliya oo dalab 3 qodob ka kooban u gudbisay ICJ | KEYDMEDIA ONLINE
Kiiska Badda: Soomaaliya oo dalab 3 qodob ka kooban u gudbisay ICJ
Dacwaddda badda Soomaaliya waxay u dirtay xukun, waxaana la filayaa in xukunka uu ku soo baxo bilooyin. Maadama dooda iyo difaaca qareenada Soomaaliya ahayd mid aad u sareysa.
HAGUE - Maxkamadda Caaalamiga ee Caddaaladda ee ICJ waxay shalay oo ay taariikhdu tahay 18/03/2021 u fadhiisatay dhagaysiga gabagabadda dacwadda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa.
Soomaaliya codsigeedii gabagabaynta waxay ku dalbatay.
2. In Maxkamadda xadayso dhul badeed iyo soohdinta badda Soomaaliya iyo Kenya ee badwaynta hindiya oo ay ku jirto qalfoof badeedka 200 NM loona xadeeyo si waafaqsan Xeerarka badda iyo kuwa Caalamiga ah.
3. In Maxkamadda go'aamiso islamarkaana caddayso dhulbadeedka la isku haysto uu xadgudub ku yahay waajibaadka Caalamiga ah ee Dowlad ahaan saaran iyo in Kenya mas'uul ka tahay si waafaqsan Xeerarka Caalamiga in ay ka bixiso magdhow, Soomaaliyana ku soo wareejiso dhamaan macluumaadka oo ay ku jirto sahminta ay ka samaysay goobaha ay Maxkamadda u xukunto ee hoos imaanaya Madax banaanida iyo gobanimadda dhulbadeedka Soomaaliya.